China Uhlobo oluhle lwe-LED Phuma uphawu lwamkelwe yi-Yuropu ukwenziwa kunye nefektri | Saselux
Izindlu ze-ABS ezenziwe ngenaliti
Udonga, isilingi okanye ukuxhoma
Igalelo Voltage: 110-240V
Ukusetyenziswa kwamandla: 3W max.
Ixesha lokukhupha: iiyure ezi-3
Lobukhulu: 276.6 * 234 * 43.9mm
① [Uluhlu oluDwelisiweyo lwaseYurophu] Le modyuli yophawu olusebenzayo lomntu ophuma kuluhlu idweliswe kwiSatifikethi se-CE. Ukudodobalisa umlilo, inaliti ebunjiweyo yezindlu ze-thermoplastic, iMigangatho yeZibane eziNgxamisekileyo, Amandla kunye nezixhobo zeYunithi.
② [AMANDLA AXAKEKILEYO] Isibane esingxamisekileyo esakhelwe-ngaphakathi kwi-3.6V Nickel cadmium backup battery, ibonelela ngemizuzu eli-180 yokusebenza okungxamisekileyo ngexesha lokuphuma kombane. Imveliso ephezulu yebhetri, i-110-240V yesicelo esingxamisekileyo sokuhlala kunye nesorhwebo.
③ [Umgangatho ophezulu] Owona mgangatho uphezulu sisithembiso kubo bonke abathengi. Ukukhanya okungxamisekileyo kwenziwa ngezinto ze-THERMOPLASTIC ABS HOUSING. Oku akuyi kuguga emva kokusebenzisa ixesha elide kwaye kuqinisekisa ukomelela kwesakhiwo ngasinye ngexesha lofakelo kunye nokudityaniswa. Iqhosha lokuvavanya elisetyenziswe koku kukhanya okungxamisekileyo kuye kwenziwa iimvavanyo ezili-1000 ukuqinisekisa ukuba ukukhanya okungxamisekileyo kunokukhanyisa ngokuzenzekelayo ngexesha lokusilela kwamandla, kwaye iqhosha lokuvavanya aliyi kusilela emva kokuba amandla ebuyile.
④ [Ufakelo olulula] Umqondiso ophuma ngexesha likaxakeka okhokelayo unokuba ludonga, isilingi, kunye nokufaka ikhefu. Kufanelekile ukuba kufumaneke indawo emanzi engaphakathi, kodwa ingekho manzi.
⑤ [Umgangatho oQinisekisiweyo kunye neNkonzo] Zonke i-SASELUX zikhokele izibane zokuphuma ngokungxamisekileyo ezigutyungelwe ngumgaqo-nkqubo ongenangxaki IMALI-NGOKUGQIBELA NESIQINISEKISO esixhasa i-5years yeebhodi zombane kunye nezindlu ngenkonzo yobungcali emva kokuthengisa.
Egqithileyo Uphahla okanye ukuxhoma ukuphuma komlilo kuLuphawu oluDumileyo eYurophu
Okulandelayo: Umtya ococekileyo woMcoci womoya oHlaziya umoya kwiNtamo
Ukuphuma kokuKhanya ngezibane eziNgxamisekileyo
Phuma Izibane Ngezibane Ezingxamisekileyo
Phuma Iimpawu Ngezibane Ezingxamisekileyo